Download Fortaleza City + Photoreal Airport FSX & P3D - Rikoooo
downloads 28 829
Foto-ezigbo ndaba maka FSX na Prepar3D v1 na 2, gụnyere Pinto Martins ọdụ ụgbọ elu mba ụwa (SBFZ / FOR) ya na ọdụ ụgbọ elu ya na obodo Fortaleza na Brazil, gụnyere ụzọ ala gbara osimiri okirikiri, autogen ogbe na gburugburu, okporo ụzọ, okporo ụzọ ikuku, ụlọ 3D, ọhịa ọhịa. Ala a kpuchiri ekpuchi ukwuu n’ala, ezigbo ebe a dị egwu.
Fortaleza (Portuguese pronunciation: [foʁtalezɐ], Ebe e wusiri) bụ isi obodo nke Ceará, emi odude ke Northeastern Brazil. Na a bi nso 2.55 nde (mepere region n'elu 3.6 nde), Fortaleza bụ 5th kasị ukwuu na obodo Brazil. Ọ nwere ebe 313 square kilomita (121 sq mi) na kasị elu omume igwe mmadụ njupụta na mba (8,001 kwa km²). N'ebe ugwu nke obodo ụgha Atlantic Ocean; nke dị n'ebe ndịda bụ municipalities nke Pacatuba, Eusébio, Maracanaú na Itaitinga; n'ebe ọwụwa anyanwụ bụ obodo nke Aquiraz na Atlantic Ocean; ma n'ebe ọdịda anyanwụ bụ obodo nke Caucaia. Bi n'obodo na-mara dị Fortalezenses. Nke ugbu a onyeisi obodo bụ Roberto Claudio, a dọkịta onye gụsịrị akwụkwọ na Federal University of Ceará. Fortaleza bụ otu n'ime atọ nke odudu obodo na Northeast region ọnụ na Recife na Salvador.
Obodo ga-abụ otu nke usu obodo ndị 2014 FIFA World Cup. Ọzọkwa, Fortaleza kwadoro 2013 FIFA Confederations Cup. (Wikipedia)
Onye edemede: guyfs9, Bruno Israel, Rui Mesquita